ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » စူပါမာရီယို Run ကို
စူပါမာရီယို Run ကို APK ကို
သငျသညျသူအဆက်မပြတ်ရှေ့ကိုပြေးအဖြစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်မာရီယိုကိုထိန်းချုပ်။ သငျသညျစတိုင်ခုန်, အနွှယ်ခပ်သိန်းလှည့်ခြင်းများနှင့်မြို့ရိုးကိုချွတ်ဆွဲထုတ်ရန်သင့်ဘုံဘိုင်အချိန်ဒင်္ဂါးပြားကိုစုသိမ်းနှင့်ရည်မှန်းချက်ရောက်ရှိရန်ခုန်!
စူပါမာရီယို Run ကိုအခမဲ့ download လုပ်နိုင်ပြီးသင်ကစားပွဲဝယ်ယူပြီးနောက်, သင်လိုအပ်သောအပိုမရှိငွေပေးချေမှုနှင့်အတူအပေါငျးတို့သ Modes သာကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်တို့ရှိသမျှလေး Modes သာဝယ်ယူမတိုင်မီစမ်းနိုင်သည် World Tour, ဘားပြုပ်ပြိုင်ပွဲ, Remix 10, နှငျ့နိုငျငံတျော Builder ။
World Tour ■
Run နှင့် Bowser ရဲ့ဒဏ်လက်မှထံမှမင်းသမီး Peach ကယ်တင်ရန်စတိုင်နှင့်အတူခုန်!
လွင်ပြင်, တွင်း, တစ္ဆေအိမ် airships, ရဲတိုက်, နှင့်ပိုပြီးမှတဆင့်ခရီးသွားခြင်း။
အဆုံးမှာမိမိသည်ရဲတိုက်၌စောင့်ဆိုင်းနေ, Bowser ကနေမင်းသမီး Peach ကယ်ဆယ်ဖို့ 24 စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သင်တန်းများရှင်းလင်းပါ။ ထိုကဲ့သို့သောရောင်စုံဒင်္ဂါးပြား၏3ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုစုဆောင်းအဖြစ်သို့မဟုတ်သင့်မိတ်ဆွေများကိုဆန့်ကျင်အမြင့်ဆုံးရမှတ်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းအားဖြင့်သင်တန်းများခံစားရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ သငျသညျအခမဲ့ 1-1 မှသင်တန်းများ 1-4 ကြိုးစားနိုင်ပါ။
မင်းသမီး Peach တစ်ကိုးသင်တန်းအထူးကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်ပြီးနောက်ကမ္ဘာ့ဖလားစတားပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ရောနှော 10 ■
သငျသညျအစဉျအမွဲကစားပါလိမ့်မယ်အတိုဆုံးစူပါမာရီယို Run ကိုသင်တန်းများအချို့သည်!
ဒီ mode ကိုက်-size ပြီးတော့ Activision နေတာအတွက်စူပါမာရီယိုကို Run ပါ! သင့်အနေဖြင့်သင်တန်းများသင် play တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ပြောင်းလဲနေတဲ့အတူ 10 တိုတိုသင်တန်းများမှတဆင့်အခြားပြီးနောက်တဦးတည်းဆော့ကစားပါလိမ့်မယ်။ daisy တစ်နေရာရာမှာ Remix 10 အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ, ဒါကြောင့်သူမ၏တွေ့ရှိရန်အဖြစ်အများအပြားသင်တန်းများသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်ကိုရှင်းလင်းဖို့ကြိုးစားနေပါသည်!
ဒီစိန်ခေါ်မှု mode မှာ, ယှဉ်ပြိုင်သင်သည် play တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ကွဲပြားနေသည်။
သငျသညျဒင်္ဂါးပြားကိုစုသိမ်းအဖြစ်အမြင့်ဆုံးရမှတ်အခြားကစားသမားများ၏စတိုင်ရွေ့လျားဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်ဘားပြုပ်တဲ့လူအစုအဝေးတို့ကအပေါ်မှီဝဲခြင်းရ။ ပိုပြီးဒင်္ဂါးပြားရဖို့အကြွေစေ့ Rush Mode ကိုဝင်ဖို့စတိုင်ရွေ့လျားအတူ gauge ဖြည့်ပါ။ သင်ချီတက်ပွဲအနိုင်ရလျှင်, ကြီး၏အားပေးမှုဘားပြုပ်သင့်ရဲ့နိုငျငံတျော၌တိုက်ရိုက်လာကြလိမ့်မည်, သင်၏နိုင်ငံတော်သို့ကြီးထွားပါလိမ့်မယ်။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့နိုငျငံတျောသညျဖနျတီးဖို့ကွဲပြားခြားနားသောအဆောက်အဦများနှင့်အလှဆင်ပေါင်းစပ်။ ခင့်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း mode မှာပစ္စည်း 100 မျိုးကျော်ရှိပါတယ်။ သငျသညျဘားပြုပ်ပြိုင်ပွဲ၌ သာ. ဘားပြုပ်ရဆိုလျှင်, မရရှိနိုင်အဆောက်အဦးများနှင့်အလှဆင်၏နံပါတ်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းဖော်ရွေဘားပြုပ်၏အကူအညီနှင့်အတူသင်ကတဖြည်းဖြည်းသင်၏နိုင်ငံသည်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာအားလုံး World ဝယ်ယူပြီးနောက်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်■
·ကမ္ဘာ့လှည့်လည်အားလုံးသင်တန်းများဖွင့ ်. များမှာ
ဒါဟာ Remix 10 နှင့်ဘားပြုပ်ပြိုင်ပွဲကစားရန်လိုအပ်ဖြစ်ကြောင်းပြိုင်ပွဲလက်မှတ်တွေရဖို့ပိုလွယ်ကူပါတယ်။ သငျသညျအပိုဆုဂိမ်းအိမ်များမှတဆင့်ခင့်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း၌သူတို့စုဆောင်းနိုင်သလဲ ကမ္ဘာ့ဖလားခရီးစဉ်အတွက်အရောင်ဒင်္ဂါးပြားစုဆောင်းနေဖြင့်လုပ်ကွက်များ, နှင့်ပိုပြီး။
·ပိုဖွင့ ်. ဇာတ်ကောင်
သငျသညျသင်တန်း 6-4 ပြီးပါကအားဖြင့်မင်းသမီး Peach ကယ်တင်ရန်နှငျ့နိုငျငံတျော Builder mode မှာ Luigi, Yoshi နှင့် Toadette များအတွက်နေအိမ်များတည်ဆောက်လျှင်, သင်ကသူတို့ကိုဖွင့ ်. ဇာတ်ကောင်အဖြစ်သင့် Adventures join ဖို့ရနိုင်သည်။ သူတို့ကကွဲပြားခြားနားမာရီယိုထက် play, ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ကမ္ဘာ့ဖလားခရီးစဉ်နှင့်ဘားပြုပ်ပြိုင်ပွဲ၌ကောင်းသောအသုံးပြုမှု၎င်းတို့၏အထူးဝိသေသလက္ခဏာများကိုတင်မဟုတ်လော
ဘားပြုပ်ပြိုင်ပွဲအတွက်ရရှိနိုင်သင်တန်းများအမျိုးအစားများအတွက်ပျော်စရာတိုးချဲ့, သင်တန်းများခုနစ်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုမှတိုးမြှင့်မည်! သစ်ကိုဖြည့်စွက်အတူ Purple နှင့်အဝါရောင်ဘားပြုပ်ကိုလည်းသင်တို့အဘို့အားပေးစရာလာနိုငျသညျ။
ရရှိနိုင်အဆောက်အဦးအမျိုးအစားများတိုးမြှင့်မည်, သို့မှသာသင်သည်သင်၏နိုငျငံတျောသညျ ပို. ပင်သွက်စေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့နိုငျငံတျောသညျကိုချဲ့ထွင်ရန်သက်တံ့ရောင် Bridges နေရာပေးနိုင်သည်။
·စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုဘဲ Remix 10 Play
သငျသညျအသီးအသီးဂိမ်းအကြားစောင့်ဆိုင်းရန်မလိုဘဲ, စဉ်ဆက်မပြတ် Remix 10 ကစားနိုင်ပါတယ်။
ကစားရန်လိုအပ် * အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု။ ဒေတာကိုစွဲချက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ကြော်ငြာများပါဝင်နိုင်သည်။
Ver ။ 3.0.4 Update ကိုပြန်ကြားရေး:
သငျသညျအစဉျအမွဲကစားပါလိမ့်မယ်အတိုဆုံးစူပါမာရီယို Run ကိုသင်တန်းများတချို့၏ဖန်ဆင်း remix 10, ကဒီမှာပါ!
အချို့သောအသစ်စက်စက်သင်တန်းများ, သစ်တစ်ခုဖွင့ ်. ဇာတ်ကောင်, သင် play နေချိန်မှာသင့်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းနားထောင်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ feature အသစ်လည်းရှိပါတယ်!
အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသောစူပါမာရီယို Run ကိုထွက်မကြိုးစားအဘယ်ကြောင့်နည်း
82.18 ကို MB
ကို Nintendo Co. , Ltd